Iifoto eziyi-15 zokuThenga-ezona ziBalaseleyo zeZakhelo zeKhaya eliSitayile - Thenga Ngoku
Iifoto eziyi-15 zokuThenga-ezona ziBalaseleyo zeZakhelo zeKhaya eliSitayile
UJohn Lewis kunye namaQabane
Veza ezona nkumbulo zakho zixabisekileyo kunye neefoto ozithandayo ezisuka kwialbham yefoto eneefreyimu zemifanekiso enesitayile sekhaya lakho.
Mhlawumbi ufuna iifreyimu ezimbalwa ezimileyo ecaleni kwebhodi yakho esecaleni okanye kwi itafile yekofu , mhlawumbi emva kwesakhelo sokuhombisa kwifoto ekhethekileyo, okanye ufuna ukudibanisa umxube weefoto zosapho kunye neprinta zobugcisa zesitetimenti. udonga lwegalari epasejini. Unokufuna ukuyigcina ilula ngomqolo weefoto ezimnyama ezibekwe eludongeni, okanye ifreyimu yemifanekiso emininzi ukubonisa iifoto zakho zeholide okanye ukuzisa Imifanekiso ka-Instagram ebomini.
Iindaba ezimnandi: kukho ukhetho oluninzi olunokukuvumela ukuba ubonise iifoto zakho ngendlela ebhalwe ngokwenyani. Nangona kunjalo, ukukhetha okuninzi kunokwenza ukuba kube nzima ngakumbi ukufumana isakhelo somfanekiso ogqibeleleyo. Ke senze wonke umsebenzi onzima ukwenzela wena. Apha sijikeleza ezona freyimu zibalaseleyo zekhaya lakho ngezantsi.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1Iifayile ezininzi zemifanekisoI-Luna Photo Art Display UJohn Lewis kunye namaQabane Isithunzi yingcube.comI- £ 50.00 THENGA NGOKU
Isakhelo sefoto setyhula ngumboniso wobugcisa ngokwawo. Gcwalisa ngeenkumbulo ezimnandi zeefoto zosapho kunye nabahlobo. Kukulungele ukuhamba epasejini okanye kwigumbi lokuhlala.
Ubukhulu: 4 x 6 kwi, 10 x 15 cm.
Iifayile ezininzi zemifanekiso: Oku Isakhelo sefoto engwevu esi-12 esisuka kwiArgos Luluhlu olukhulu lokuthenga, ngelixa Isakhelo sefoto esimhlophe sikaDunelm iyakwenza wow wow.
MbiniUkuxhoma iiFreyimu -Izakhelo zeZithombe eziBalaseleyoIsakhelo somfanekiso oxhonywe ngeCopper notonthehighstreet.com notonthehighstreet.comI-US $ 26.58 THENGA NGOKU
Yenziwe ngobhedu ngentambo yokuxhoma i-rustic, ezi zintle zemifanekiso zilungile ukubonisa iikholaji zeefoto, ukuprintwa kwescreen esikhulukazi okanye iintyatyambo ezicinezelweyo.
Izakhelo zemifanekiso ezijingayo: Thatha enye efanayo iseti yeefreyimu ezi-3 zokuxhoma iifoto eLa Redoute .
3Iifoto eziMnyama eziNtsundu-Ezona Freyimu zemifanekisoIsakhelo somfanekiso weSwartwood Indlela indlela yokwabelana.co.uk£ 7.04 THENGA NGOKU
Ngaba ufuna ukuyigcina ilula? Iifreyimu ezimnyama ezimnyama (okanye ezingwevu okanye ezimhlophe ngokufanayo) zilungile kuba, emva kwayo yonke loo nto, ifoto iya kuthetha amagama aliwaka. Isakhelo sefoto esilungele ukuxhonywa kwiWayfair lukhetho olukhulu kwaye luyafumaneka kuluhlu lobungakanani.
Ubukhulu: ukusuka ku-7 x 5 ukuya kwi-20 x 16 kwi.
Uninzi lwesakhelo somfanekiso omnyama: UJohn Lewis uphinde athengise ezi fowusta zimnyama ngobukhulu obahlukeneyo.
4Igalari yeWall Photo Frames-Ezona Zakhelo zoMfanekiso ziBalaseleyoIgalari Setha iiFreyimu ezininzi zeefoto, Iifoto ezili-11, eziMnyama yingcube.com UJohn Lewis yingcube.comI- £ 80.00 THENGA NGOKU
Ngokugqitywa okumnyama kweklasikhi, le pakethi yeefreyimu ezili-11 ilungele ukuqala kwe udonga lwegalari . Kukulungele ukwenza udonga olubonakalayo kwigumbi lokuhlala, ipaseji okanye kwizinyuko.
ngaphakathi uyilo online simahla
Ubukhulu: Iifreyimu ezi-4 ezinobukhulu obu-4 x 6 in (10 x 15cm), izakhelo ezi-4 5 x 7 kwi (13 x 18cm), iifreyimu ezi-2 ezi-6 x 8 kwi (15 x 20cm), kunye nesakhelo esinye 8 x 10 kwi (20 x 25cm).
Iifowuni zemifanekiso yodonga olungakumbi: Oku Isakhelo sefoto esili-10 esisethwe eAmazon sisisivumelwano .
5Iifoto zePlanga zomthi-Ezona Zakhelo zoMfanekiso ziBalaseleyoIsakhelo seHabibi Mango Wood Ikona nkuku.comIipawundi ezingama-26.95 THENGA NGOKU
Isakhelo sefoto somthi sinokuthandeka kwaye sinokuhambelana nayo nayiphi na i-rustic yanamhlanje okanye ilizwe langaphakathi. Ezi freyimu zenziwe ngezandla ngomthi wemango ozinzileyo kwaye zilungele ukwenza iifoto zakho ezixabisekileyo.
Ubukhulu: 4 x 6 ngo, 5 x 7 kwaye 8 x 10 ngo.
Iifreyimu zemifanekiso ezingaphezulu zomthi: UDunelm uthengisa le freyimu yendalo ngentaba emhlophe, esiyithandayo.
6Iifoto ezinkulu zeFoto-ezona ziFowuli zeZithombeIsakhelo sePosta yoMthi, emhlophe UJohn Lewis kunye namaQabane UJohn Lewis yingcube.comI- £ 25.00 THENGA NGOKU
Ngaba ujonga ezinye izakhelo ezinkulu kubungakanani be-A4, A3, A2 kunye no-A1? Ukuqhayisa ngobukrelekrele, imbonakalo yeli xesha, lo mfanekiso umhlophe weplanga kunye nesakhelo sepowusta siyafumaneka kuluhlu lobukhulu obukhulu ukuze silingane nayiphi na ifoto okanye ukuprinta
Ubukhulu: A4 - (21 x 30cm), 12 x 16 kwi (30 x 40cm), A3 - (29 x 42cm), 16 x 19 in (40 x 50cm) kunye A2 - 16.5 x 23.5 kwi (42 x 59.5cm)
Ezininzi izakhelo zemifanekiso: Indawo yokuhlala ithengisa ukhetho olukhulu lweefreyimu zodonga bonke ubungakanani kunye nezitayile.
7Iifreyimu ezimileyo ezimiyo-Ezona Zakhelo zoMfanekiso ziBalaseleyoIsakhelo esimnyama esimhlophe Inkampani yeWhite Inkampani yeWhite zintangI- £ 55.00 THENGA NGOKU
Elula kwaye icokisiwe, oku kuma, isakhelo somfanekiso we-easel esivela kwiNkampani eNgcwele kulungele ukugcina iifoto zakho ezixabisekileyo kunye nomsebenzi wobugcisa.
Ubukhulu: Ubungakanani befoto, 8x8cm
Izakhelo zemifanekiso ezijingayo: UJohn Lewis uyathengisa oku ukhetho olufikelelekayo olufikelelekayo Ngelixa uOliver Bonas enale nto Isitayile esihle esenziwe ngegolide .
8I-Collage Photo Frames-Eyona Freyimu yeZithombeIsakhelo samaxesha Inkifi inkifi.com£ 101.15 THENGA NGOKU
Ukushicilelwa kweprimiyamu engama-52 kuyizisa ubungakanani obungaphantsi kokuhonjiswa kodonga. Inkifi.com iya kuprinta iifoto zakho ezikhethiweyo ezingama-52 kwaye uzixhome ngokufanelekileyo kwisakhelo esimhlophe, ugcwalise ngeglasi ye-perspex. Izisiwe emnyango kunye neteyiphu exhasayo kunye nomtya, ukulungele ukuxhoma.
Ubukhulu: Ubungakanani bomfanekiso ngamnye, 60mm x 60mm.
Iifayile ezininzi zekholaji: Ungalayisha iifoto zakho zedijithali nge Ukufumana ukuprintwa kweefoto zakho ezili-12 ukwenza ukubonakala kobusela.
9Iifayile zeRose zeGolide zeGolide-ezona ziFoto ziBalaseleyoIsakhelo seFoto yeGolide yeGolide Amara U-Addison Ross amara.comI- £ 28.00 THENGA NGOKU
Esi sakhiwo sokuma sodidi oluphezulu segolide siya kuzisa umtsalane kubuhle bakho bangaphakathi. Yinto entle ngaphandle kwamandla.
Ubungakanani: 4 x 6in.
Okungakumbi rose izakhelo zemifanekiso yegolide: Lo mhlaba isakhelo segolide esivela kuOliver Bonas ikhathaza zonke iibhokisi zesitayile, njengoko kunje isakhelo sobhedu esivela eDunelm .
10Iifoto zoMbala eziBala-ezona Fowunelwa zemifanekisoIimodeli ezinemigca yeTeal Photo Frame 6x4 ' oliverbonas.com oliverbonas.com£ 18.00 THENGA NGOKU
Isakhelo semifanekiso esimibalabala, semarble esiza kuzisa umbala oqaqambileyo kumbala wakho wangaphakathi. Ingabonakaliswa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye.
Ubungakanani : H 18cm x W 13cm x D 2cm
Iifayile zemibala emibalabala: Ezi Iifoto zeefoto ezivela ku-Etsy ziza ngemibala yomnyama , ngelixa oku Uhlobo oluhlaza okwesibhakabhaka oluvela kuJohn Lewis ilungele intwasahlobo / ihlobo.
Shumi elinanyeIifoto ezihombisayo -Iifreyimu zemifanekiso eziBalaseleyoIshiya isakhelo seFoto, iGolide UJohn Lewis kunye namaQabane UJohn Lewis kunye namaQabane yingcube.com£ 15.00 THENGA NGOKU
Siyayithanda le freyimu yegolide, inamagqabi athambileyo ajikeleze umjelo. Sisiqwenga sobugcisa nangaphambi kokuba ubeke ukushicilelwa kwakho kuyo-oku kuyakuphakamisa indawo yakho yodonga.
Ubungakanani : 10 x 15cm kunye 13 x 18cm
Imizobo yemifanekiso emininzi yokuhombisa: Oku isakhelo sefoto seeperile kwiMonsoon intle ngokwenene, ngelixa ezi iifreyimu ezinemigca ukusuka eNotonthehighstreet yenza ingxelo.
12Iifayile zeglasi zeGlasi- ezona Freyimu zemifanekisoIglasi ephinde yenziwa isetyenzisiwe kunye nesakhelo sefoto yentsimbi Notonthehighstreet.com IPhepha eliPhakamileyo notonthehighstreet.comI-US $ 16.95 THENGA NGOKU
Amaxesha athathiweyo emtshatweni, uChristening okanye usuku lokuzalwa olukhangeleka luthandeka kwenye yezi glasi ziphinde zenziwe ngefoto. Ukuqhayisa nge-rustic elegance, iphindwe kabini, kwaye ngeefowuni ezimbini inokubamba iifoto ezine. Oku kulungile kwitafile yekofu njengoko iifoto zinokubonakala kuzo zonke ii-angles.
Ubungakanani: Encinci ukulingana ifoto ye-intshi ye-4x4, Encinci ukulingana ifoto ye-intshi ye-6x4, Phakathi ukuze ilingane ifoto ye-intshi ye-7x5 kwaye inkulu ukuze ilingane ifoto ye-intshi eyi-10x8.
Ezinye izakhelo zemifanekiso yeglasi: Wayfair ithengisa isakhelo sefoto esifanayo , ngelixa sizithanda ezi izakhelo zobhedu zakudala ezivela eNkuku .
13Iifayile ezincinci zeefotoIsakhelo seFoto ye-Easel 8 x 10 intshi (20 x 25cm) NKSK markandspencer.com£ 15.00 THENGA NGOKU
Gcina umncinci kunye nesakhelo esincinci sefoto, ulungele ukongeza umnxeba wangoku kwinto yakho yokuhombisa.
Ubukhulu: 8 x 10in
Uninzi lwezakhelo zeefoto: Gcina ilula ngale nto isakhelo esimnyama esivela kuJohn Lewis okanye le isitayile esincinci esivela kwi-Etsy .
14Iipateni zeefoto zePateni- iZakhelo zeZithombe eziBalaseleyoIsakhelo seFoto yeLoop IBohemia unokdiren.co.uk£ 15.40 THENGA NGOKU
Iscreen esishicilelweyo ngomzekelo wokudlala ocacileyo wokudlala kunye nomphetho wethambo wenyathi ethambileyo ongwevu, lo mfanekiso uthandekayo - wenziwe ngezandla ngamagcisa eIndiya usebenzisa i-resin, ukhuni kunye nethambo-ilungile kwishelufa okanye kwinto yokuhombisa. Ibandakanya iphepha leglasi ukukhusela imifanekiso yakho.
Ubukhulu: 15 x 10 cm (6 x 4 in).
Ezinye izakhelo zemifanekiso Oku ifreyim eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neempondo zendlovu evela eLa Redoute intle ngokwenene, ngelixa ezi izakhelo ezifanayo ezivela kwiAnthropologie zilungele itafile yokunxiba.
imibono yetafile yegumbi lokutyela
Shumi elinantlanuIibhokisi zeefoto zeefotoBonisa imeko ngeSakhelo esiQinisekisiweyo seNkuni kunye neGlasi esusekayo amazon.co.uk Uthando-KANKEI amazon.co.uk£ 23.99 THENGA NGOKU
Iifoto zeefoto zebhokisi zilungile kwidrama eyongeziweyo. Mane ubeke ifoto yakho ngasemva kweglasi yefuthe le-3D. Ingaboniswa ngokuthe tye nangokuthe nkqo. Kananjalo oku, unokuyisebenzisa ukubeka ezinye iinkumbulo, amatikiti kaloliwe, iintyatyambo ezomileyo okanye amanqaku abhaliweyo.
Ubukhulu: 11 x 14
Iibhokisi zemifanekiso emininzi yebhokisi: Ungathenga ezinye Iifoto zeebhokisi zexabiso eliphantsi ezivela kwiHobbycraft , kwaye unokufumana izandla zakho kule nto isitayile esimhlophe esiqhelekileyo esikwiRinkit.com .
Ngaba uyayithanda le nqaku? Bhalisa kwincwadana yethu ukufumana amanqaku angakumbi ngolu hlobo kusiwa ngqo kwi-inbox.
kwimibono yephuli yomhlaba
bar encinci ikea yekhabhinethi
Usuku lwezithandani lwezandla kubantu abadala